Indlela yokulala, ukuba awukwazi ukulala
Kubaluleke kangakanani ukuphupha komgangatho.
Ingxenye yesithathu yobomi bakhe umntu elele, akanakuphila ngaphandle kokulala ngaphezu kweentsuku ezine. Kodwa ngesidyulo samhlanje sobomi, ngokukodwa kwizixeko ezinkulu, abantu abaninzi abanengqiqo, i-alas, bahlala ngendlela engafanelekanga, bengabi naso ixesha lokulala ngokwaneleyo, okanye ngenxa yokunyanzeliswa okuqhubekayo ukuba balele kuphela ngeepilisi zokulala. Kodwa umgangatho kunye nomlinganiselo wobuthongo obuchaphazela kuphela impilo yakho ngosuku oluthile, kodwa nempilo yakho ngokubanzi. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukuba ubuthongo buzele kwaye, ngaphezu kwakho konke, kubalulekile ukuqala iphupha. Umbuzo wendlela yokulala, ukuba awukwazi ukulala, ezininzi iinkxalabo, makhe sizame ukufumana impendulo. Oko kufuneka uyenze ukulala.
Okokuqala, kufuneka uyancitshise umsebenzi wakho malunga neyure ngaphambi kokulala. Ngeli thuba kuyafaneleka ukuthatha ibhola yokuphumla, ukutya isidlo sokutya okanye ukwenza uqeqesho lwe-autogenic. Ungafunda okanye ufunde into ethile, kodwa kufuneka ukhethe ngokucophelela umkhiqizo, kuba abaxhamli kunye nabacuphi awanalo ukuba bangaboni ukulala, bawuthatha iiyure zokulala, babambe kwaye basenze sifunde ekupheleni.
Okwesibini, kubalulekile ukunyamekela ukukhanya kunye nesandi semvelaphi, ngokuchanekileyo ukwenzela ukuba akunakwenzeka, ukuba kunokwenzeka. Ingxaki enjalo ingundoqo kwiidolophu ezinkulu-phantsi kweefestile zonke izibane ezivuthayo ezibusuku, ukukhwabanisa abaqhubi kunye nabavuni. Ukukhanyiswa kombane kuya kunceda ukujamelana namakhethini anqamlekileyo, kunye neengxolo - iifestile ze-euro kunye neendonga zomsindo. Ukudala umoya ococekileyo, unokuvula ubusuku obusuku, sele uphuzile amancinci amancinci amathandayo akho.
Enye into ebalulekileyo kukuba ibhedi kufuneka isetyenziswe kuphela ukulala, i-reflex iphuhliswa kwaye ixhomekeke ngokujulile emzimbeni womntu. Ukuba ulala embhedeni, bukela iTV, ulungiselele ukuhlolwa, kwaye iingxaki zobuninzi kunye nobuninzi bokulala bubonelelwa, kwaye ngokukodwa nendlela yokulala.
Ngaphambi kokuqala kokulala, kubalulekile ukuvuselela igumbi, sele sele ulele phantsi ungenza ukuphefumula, ngokukodwa le ndlela yokuphumla ixabiswa kwaye iqhutyelwa eMpuma, apho, njengoko kwaziwa, izinto ezininzi ezizilumko kufuneka zamukelwe.
Musa ukubala izimvu ezigxuma phezu kocingo, ibhajethi iyasebenza kuphela ingqondo kwaye ikuvimbela ukuba ungalali, bhetele udle i-spoonful of honey and make yourself a chart chart engomso.
Ukuba uya kulala, kwaye awukwazi ukulala, ungaphuma ebhedeni, wenze enye ishishini elingakhathali kwaye ubuyele ngokukhawuleza xa ufuna emva komqubo ophantsi ophantsi kwengubo epholileyo.
Iimbangela zeemvumba ze-varicose
I-Mastopexy yesifuba (ukuphakama kwebele)
Ukupheka kwamadoda ngenxa yeentloko
Izindlela zokonyango kwamanqaku elula
Amaminerali awusizo emzimbeni womntu
Ukwakhiwa kweMikhali ye-rutabaga
Ukuhleka ngokukhazimulisa: i-strobe-meykap-i-trend6-2016
Iimeko eziyingozi ezilindele umntwana ehlobo
I-Kebabs yesibindi sesilwanyana
Ukuphuhlisa imidlalo yekhompyutha yabantwana
Iziqholo: izitishi kunye ne-pluses
Indlela yokwenza ii-pigtails zaseAfrika
I-Casserole kwiipulo kunye nemihla
Unina kaVera Brezhneva uthetha ngokukhulelwa kwesithathu komculi
I-Horoscope ngo-2010 ngeenyanga, iCapricorn
Ungaziphoqa njani ukuqeqesha?
Ukutolika kwamaphupha: Yintoni inkomo ephupha ngayo?
Ukufaneleka komzimba: I-clock tracker yeFitbit Blaze
Indlela yokuphatha imilenze ye-varicose
I-omelette eneparmesan ne-sweet pepper
U-Nikita Dzhigurda wamemezela uxolo kunye noMarina Anisina kunye nomntwana wesithathu
Berry bilberry kwisondlo somntu